क्यानडा जान चाहनेका लागि सम्पूर्ण जानकारी– आवेदन प्रक्रियादेखि कागजात र अन्तर्वार्तासम्म - Everest Dainik - News from Nepal
क्यानडा जान चाहनेका लागि सम्पूर्ण जानकारी– आवेदन प्रक्रियादेखि कागजात र अन्तर्वार्तासम्म
भिसा आवेदन केन्द्र (VAC) के हो?
भिषा आवेदन केन्द्रहरु संसारभरि अध्यागमन, शरणार्थीहरु र नागरिकता क्यानडाको कार्यालय सबै अस्थायी बसोबास कोटिहरु (आगन्तुक भिसा, अध्ययन र कार्य अनुमति) तथा विश्वभरि नै अध्यागमन, शरणार्थीहरु र नागरिकता क्यानडाको कार्यालयहरुमा यात्रा कागजात आवेदनहरुका लागि आवेदनहरुको सफलतापूर्वक पेशका लागि आफ्ना ग्राहकहरुलाई प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्न स्थापना गरिएको हो।
नेपालको लागि VAC ठेकेदार को हो?
VF सर्भिसेस मरिसस प्राइभेट लिमिटेड एउटा निजी कम्पनी हो जो काठमाडौं, नेपालमा भिसाा आवेदन केन्द्र संचालनका लागि अध्यागमन, शरणार्थीहरु र नागरीकता क्यानडा द्वारा प्राधिकृत छ।
मैले सुनेको त्यहाँ त्यहाँ 02 नोभेम्बर 2018 मा फरक सम्झौता हुनेछ। यसले मलाई कसरी असर गर्नेछ?
के मेरो आवेदन चाँडो प्रस्तुत गर्नु पर्दछ, वा पेश गर्नु अघि बिस्तारै राख्नुहोस्?
कृपया प्रोसेसिंग टाइमको सम्बन्धमा सबै सामान्य दिशानिर्देशहरू ध्यान राख्नुहोस्; यात्रा मितिहरू र अन्य कारकहरू स्थानमा रहन्छन्। कृपया आवेदन पठाउने बेला निर्णय गर्ने निर्णय 02 02 नोभेम्बर 2018 मा लागू हुने परिवर्तनहरूको बारेमा थप जानकारीको लागि Canada.ca भ्रमण गर्नुहोस्।
के मेरो अनुप्रयोग 01 फरवरी 2019सम्म VAC मा फर्किएको छैन भने के हुनेछ?
यदि तपाईंले आफ्नो आवेदन VAC मा 1 नोभेम्बर 2018 मा वा अघि भन्दा पेश गर्नुभयो भने, आईआरसीसी अफिसले कागजातहरूको फिर्ती समन्वय गर्नेछ।
मैले देखेको त्यो फिर्ती पासपोर्ट रिटर्नको लागि बढेको छ। यदि मेरो पासपोर्ट 01 नोभेम्बर 2018 पछि फिर्ता पठाइयो भने के फरक छु?
02 नोभेम्बर 2018 को अघि भुक्तानी गरिएको कुनै पनि सेवाहरू पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरिन्छ।
के म आपातकालीन नियुक्ति अनुसूचित गर्न सक्छु?
हो, कृपया जाँच गर्नुहोस् कि तपाइँसँग आवश्यक दस्तावेजहरू छन् जुन तपाईंलाई आपातकालीन श्रेणीको रूपमा योग्य गराउनेछ, यो उत्पादन गर्नका लागि विफलताले तपाईंको नियुक्ति नलिईएको छ।
मैले मेरो भिसा आवेदन कहाँ पेश गर्ने?
तपाईंले आफ्नो आवेदन भिसा आवेदन केन्द्रमा जमा गराउन सक्नुहुन्छ। विदेशको क्यानेडाली भिसा कार्यालय वा IRCC को अनलाइन आवेदन प्रणाली (E-Apps) प्रयोग गरि पनि आवेदनहरु IRCC मा पेश गर्न सकिन्छ।
के अन्य कोही व्यक्तिले मेरो तर्फबाट आवेदन पेश गर्न सक्छ?
तपाईले तपाइँको आवेदनलाई तपाईंको तर्फबाट जम्मा गर्न एक प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो गर्न कृपया प्रतिनिधि [IMM 5476] फारामको प्रयोग गर्नुहोस्। र / वा VFS ग्लोबल कन्सेन्ट फारम, तपाईंको प्याकेजमा आवेदन प्याक / निर्णय लिफाहरू पेस गर्न वा सङ्कलन गर्ने प्राधिकरणलाई प्राधिकृत गर्दै
मैले प्रत्येक पटक मेरो औंठाछाप र प्रत्येक पटक मेरो आवेदन दिनको लागी फोटो खिच्न आवश्यक छ?
यदि तपाइँ अस्थायी निवासी भिसा, अध्ययन र / वा कार्य प्रति अनुमतिको लागि एउटा आवेदन पेश गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईसँग बायोमेट्रिक चाहिन्छ, तपाईले मात्र हरेक 10 वर्षमा बायोमेटिक्स दिन आवश्यक छ।
यदि तपाइँ स्थायी आवास अनुप्रयोग पेश गर्दै हुनुहुन्छ भने, र तपाईलाई बायोमेट्रिक्स चाहिन्छ, तपाईले हरेक पटक बायोमेट्रिक्सलाई आवेदन दिन आवश्यक पर्दछ।
एक पटक मैले बायोमेट्रिक नामांकन गरेपछि, कति लामो समय औंला छाप्ने डेटाबेसमा भण्डारण हुनेछ?
जुलाई 31, 2018 को अनुसार, biometrics दस वर्ष को लागि वैध छन्। यदि आवेदकले आफ्नो बायोमेट्रिक्स अतीतमा नामाकरण गर्यो भने, उनी नामांकनको समयबाट दस वर्षको लागि मान्य छन्। भिसा वा परमिटको वैधता बायोमेटिक्सको वैधता भन्दा बढी हुन सक्दैन। स्थायी निवास आवेदकहरूले प्रत्येक अनुप्रयोगको साथ बायोमेटिक्सलाई आवश्यक पर्नेछ।
यदि तपाईंले यस 10-वर्षको अवधि भित्र क्यानाडा नागरिकता प्रदान गर्नुभएको छ भने तपाईंको औठाछापहरू स्थायी रूपमा मेटाइनेछ।
के मेरो भिसा आवेदनको लागि बायोमेटिक्स प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ?
प्रभावकारी 31 जुलाई 2018, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रिका, वा कुनै पनि अन्य देशको बायोमेट्रिक नामांकनको आवश्यकता छ जुन आगन्तुक भिसाको लागि आवेदन गर्दैछ, अध्ययन वा काम अनुमति, वा स्थायी आवास, बायोमेट्रिक्स नामांकन गर्न र तस्विरहरू प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुन सक्छ। भिसा आवेदन केन्द्रमा।
क्यानेडा भिसा आवेदन केन्द्रमा बायोमेटिक्स पेश गर्नु आवश्यक छ?
03 नोभेम्बर 2018 देखी प्रभावकारी, नेपालमा क्यानाडा भिसा आवेदन केन्द्र (CVAC) मा बायोमेट्रिक नामांकनको लागि पहिले नियुक्ति अनिवार्य छ। तपाईंको राष्ट्रीयताको आधारमा, तपाईंले पहिले नै बायोमेटिक्स दिन आवश्यक हुन सक्छ।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि भिसा आवेदन केन्द्रमा बायोमेटिक्स नामांकन गर्न नियुक्ति अनिवार्य छ। भिसा आवेदन केन्द्रमा एक मनपर्ने समय स्लॉटको साथ एक योजनाबद्ध भ्रमणले शीघ्र सेवाको ग्यारेन्टी दिन्छ त्यसैले लामो समयको प्रतीक्षा असुविधा समाप्त गर्छ।
कृपया ध्यान दिनुहोस्, अनुसूची नियुक्तिको मात्र उद्देश्यको लागि VFS ग्लोबलले आवेदकबाट व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्नेछ। यस सन्दर्भमा एक VFS ग्लोबल सहमति आवेदकबाट आवश्यक हुनेछ।
मेरो भिसा निवेदनको लागि क्यानाडा सरकारलाई कसरी भुक्तानी गर्ने ?
क्यानाडा सरकारलाई आइआरसिसि द्वारा अनलाइनबाट क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सकिन्छ वा क्यानाडियन बैंकबाट डेविट कार्डबाट INTERAC@ प्रयोग गरेर र अनलाइनको लागि दर्ता भएको तपाईको बैंक वेवसँयडबाट । क्यानाडा सरकारलाई अनलाइन शुल्क भुक्तानी गर्न कृपया तपाईको शुल्क भुक्तानी मा क्लिक गर्नुहोस् ।
मैले कसरी क्यानाडा भिएसि सेवा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्छु ?
व्यक्तिगत रुपमा निवेदन दिनेहरु वा आधिकारिक प्रतिनिधिबाट होस्, सेवा शुल्क सिएभि काठमाण्डौमा माग ड्राफ्टबाट तिर्नु अनिवार्य छ ।
क्यानाडा सरकारको शुल्क भुक्तानी सम्बन्धमा पूर्ण निर्देशन र भिएसि शुल्कको लागि कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
मैले मेरो आवेदन पेश गरेपछि के हुन सक्नेछ?
एकपटक तपाईंले भिसा आवेदन केन्द्रमा तपाईंको आवेदन जमा गराउनु भएपछि, VAC कर्मचारीले IRCC आवश्यकताहरु अनुरुप सम्पूर्णता जाँच गर्नेछ र त्यसपछि तपाईंको तर्फबाट निम्न व्यावसायिक दिनमा तपाईंको आवेदन पेश गर्नेछ। एकपटक भिसा कार्यालयले तपाईंको आवेदन निर्धारित गरेपछि तिनीहरुले निर्णय गर्नेछन् र तपाईंको राहदानीमा भिसा प्रति पाना संयोजित गर्नेछन् वा तपाईंलाई किन भिसा प्रदान गर्न सकिन्न भनि व्याख्या गरिएको पत्रद्वारा तपाईंलाई जानकारी दिनेछन्। त्यसपछि भिसा कार्यालयले तपाईंको राहदानी भिसा आवेदन केन्द्रमा सुरक्षित फिर्ता गर्नेछन् र भिसा आवेदन केन्द्रले तपाईंको सजिलो संचार विध मार्फत तपाईंलाई सूचित गर्नेछ। तपाईंको राहदानी फिर्ताका लागि तयार छ भनि अनलाइन आवेदन ट्रयाकिङ प्रणाली मा पनि अद्यावधिक उपलब्ध हुनेछ। त्यसपछि तपाईं आफ्नो राहदानी फिर्ता लिन भिसा आवेदन केन्द्रमा आउन सक्नुहुन्छ।
मलाई कुन प्रकारको भिसा आवश्यक पर्छ?
तपाईंलाई आवश्यक भिसा किसिम तपाईंको क्यानाडा भ्रमणको प्रयोजनमा निर्भर छ। भिसा किसिम सम्बन्धित थप जानकारीका लागि कृपया अध्यागमन, शरणार्थीहरु र नागरीकता क्यानडा वेबसाइटमा समावेश गरिएको विस्तृत जानकारी हेर्नुहोस्।
मैले मेरो निवेदनको स्थिति कसरी थाहा पाउन सक्छु?
तपाईंको आवेदनको स्थिति यस पृष्ठको बायाँ भागमा रहेको “ तपाईंको आवेदन ट्रयाक गर्नुहोस्” ट्याबलाई क्लिक गरि सजिलै ट्रयाक गर्न सकिन्छ।
मैले मेरो राहदानी कसरी फिर्ता पाउन सक्छु?
तपाईंको राहदानी (हरु) को वापसीका लागि, तपाईंसँग निम्न रोजाइ छ;
क्यानाडा भिसा आवेदन केन्द्रबाट व्यक्तिमा पासपोर्ट छान्नुहोस् वा,
कूरियर द्वारा पासपोर्ट को फिर्ती अनुरोध।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि उपरोक्त सेवाहरूको लागि सेवा शुल्क हुनेछ। कूरियर शुल्कहरू जहां लागू पासपोर्ट ट्राफिक सेवाका लागी सेवा प्रभार लागू हुन्छ। विवरण यहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ।
मैले मेरो राहदानी फिर्ता पाउन कस्ता कागजात आवश्यक पर्छ?
यदि तपाईं आफू नै आफ्नो राहदानी फिर्ता पाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफूसँगै निम्न कुराहरु ल्याउनुपर्छ:
तपाईंले भिसा आवेदन केन्द्रमा तपाईंको आवेदन जमा गराउँदा VFS द्वारा तपाईंलाई प्रदान गरिएको वास्तविक स्वीकृती पर्ची
तपाईंको वास्तविक राष्ट्रिय आइडी कार्ड वा फोटोग्राफ समावेश गर्ने पहिचानका अन्य आधिकारिक प्रमाण
तपाईंको फोटोग्राफिक आइडीको एक प्रतिलिपि
यदि तपाईंले आफ्नो तर्फबाट तपाईंको राहदानी संकलनमा प्रतिनिधि प्रयोग गर्ने योजना बनाउनु भएमा।
तपाईंले भिसा आवेदन केन्द्रमा तपाईंको आवेदन जमा गराउँदा VFS द्वारा तपाईंलाई प्रदान गरिएको वास्तविक स्वीकृती पर्ची।
तपाईंलाई सम्बन्धित आवेदकहरुद्वारा हस्ताक्षर गरिएको व्यक्तिगत अधिकारप्राप्त पत्रहरु उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिन्छ।
प्रतिनिधित्व गर्ने वास्तविक राष्ट्रिय आइडी कार्ड वा फोटोग्राफ समावेश गर्ने पहिचानका अन्य आधिकारिक प्रमाण।
तपाईंको प्रतिनिधि फोटोग्राफिक आइडीको एक प्रतिलिपि
आवेदन प्रक्रिया कति लामो समयसम्म हुन सक्नेछ?
हालका धेरै आवेदन प्रक्रिया समयका लागि, कृपया स्थानीय भिसा कार्यालयको वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्। कृपया वेबसाइट ठेगानाका लागि यस पृष्ठको बायाँ भागमा रहेको हाम्रो “ उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण लिङ्कहरु” ट्याबलाई रिफर गर्नुहोस्।
के मलाई भिसा कार्यालयमा अन्तरवार्तामा सहभागी हुन आवश्यक पर्नेछ?
अध्यागमन, शरणार्थीहरु र नागरीकता क्यानडा ले तपाईंलाई भिसा कार्यालयमा अन्तरवार्तामा सहभागीताका लागि अनुरोध गर्न सक्छ। भिसा आवेदन केन्द्रले तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछ, वा तपाईंलाई सिधै भिसा कार्यालयले सम्पर्क गर्न सक्छ र तपाईं अनलाइन आवेदन ट्रयाकिङ प्रणाली मा गरिएको अद्यावधिकद्वारा पनि सूचित हुनुहुनेछ।
मैले अन्य जानकारीका लागि कसलाई सम्पर्क गर्न सक्छु?
तपाईं भिसा आवेदन केन्द्रद्वारा संचालित कल केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्नहुन्छ (कृपया यस पृष्ठको बायाँ भागमा रहेको हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ट्याबलाई रिफर गर्नुहोस्), वा वैकल्पिक रुपमा अध्यागमन, शरणार्थीहरु र नागरीकता क्यानडा वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्।
मेरा लागि कुन-कुन अतिरिक्त सेवाहरु उपलब्ध छन्?
VAC ले तपाईंको सुविधा तथा आवेदन सहजका लागि, अन्य मध्ये, फोटोकपी, सहायता प्राप्त डाटा प्रविष्टि (फाराम पूरा गर्नका लागि सहायता) जस्ता विविध अतिरिक्त सेवाहरु प्रदान गर्छ। पूर्ण विवरण तथा मूल्यहरुका लागि कृपया बायाँ भागको “ सेवा तथा सेवा शुल्क अनुसूची” ट्याबलाई रिफर गर्नुहोस्।
म छ महिनाभन्दा कम समयका लागि अध्ययन गर्न क्यानाडा जाने योजनामा छु तर मेरो अध्ययन विस्तारको चाहना गर्न सक्छु। मैले कुन प्रकारको आवेदन पेश गर्नुपर्छ?
मलाई मेरो भिसा आवेदनका लागि कस्ता कागजातहरु आवश्यक पर्छन्?
तपाईंको यात्राको प्रयोजन अनुरुप आवश्यक कागजातहरु भर पर्छन्। कृपया यस पृष्ठको बायाँ भागमा रहेको “तपाईंको भिसाको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरु”ट्याबलाई रिफर गर्नुहोस् र यहाँ उपलब्ध गराइएका उचित लिंकहरु हेर्नुहोस्, वा अध्यागमन, शरणार्थीहरु र नागरीकता क्यानडा को वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्।
के भिसा कार्यालयले मलाई अतिरिक्त कागजातहरु वा जानकारी उपलब्ध गराउन माग गर्न सक्छ?
हो, भिसा कार्यालयले तपाईंलाई अतिरिक्त कागजातपत्र पेश गर्न आवश्यक पार्न सक्छ। अनलाइन आवेदन ट्रयाकिङ प्रणालीमा एउटा अद्यावधिक गरिनेछ र तपाईंले निर्देशहरु प्राप्त गर्नुभएको सुनिश्चित गर्न एउटा इमेल पठाइनेछ। त्यसपछि तपाईंलाई भिसा आवेदन केन्द्रमा अतिरिक्त कागजातपत्र पेश गर्न अनुरोध गरिनेछ र यसले त्यसपछि तपाईंको तर्फबाट भिसा कार्यालयमा आवेदनलाई पेश गर्नेछ।
म क्यानाडामा विद्यार्थीको रुपमा जान चाहन्छु। अनुदान आवश्यकताहरु के-के हुन्?
विद्यार्थीहरुका लागि अनुदान आवश्यकताहरु, अन्य तत्वहरु मध्ये, क्यानाडामा तपाईंको अपेक्षित बसाइमा भर पर्छन्। हामी तपाईंलाई नवीनतम जानकारीका लागि अध्यागमन, शरणार्थीहरु र नागरीकता क्यानडा वेबसाइटको भ्रमण गर्न सुझाव दिन्छौं तथा काठमाडौंमा भिसा आवेदन केन्द्रमा तपाईंको आवेदन जमा गर्दा तपाईंका कागजातहरुले यी मानदण्ड पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्।
यदि तपाईं क्युबेक (Quebec) को प्रावधानमा निर्धारित विद्यार्थी भएमा, तपाईंले आप्रवासन-क्युबेक वेबसाइट मा जानकारीको समीक्षा पनि गर्नुपर्छ।
vfsglobal.ca बाट साभार गरिएकाे ।
ट्याग्स: Canada job, canada visa, canada visa process from nepal